#Waliif_Qoodaa #Odeeffannoo_SalaaleAsaffaa Kuushii Eenyutu Ajjeese? Asaffaa Kuushii too\_'annoo seera jala otoo jiruu ajjeefamee bosonatti gatame. Asaffaan Ji\_'a tokko dura gara Baaleetti fudhatamee kan ture yoo tahu torbee darbe gara Salaaleetti geessanii mana hidhaa ture. Godina Baalee irraa gara Salaalee kan geesse poolisoota aanaa Kuyyuu tahuun barameera. Eenyutu Ajjeese? Maaliif?Gooticha Asaffaa Kuushii kan ajjeesise Koloneel #Abbabaa_Garasuu fi #commander_Baqqalaa (ajeja itti aana Humna Addaa Oromiyaa) tahuu 100% mirkaneessinee jirra. Jarri kun lamaan ergama ajjeesuu fi hidhuu fudhatanii Salaale jiraachuu isaanii guyyaa muraasa dura Finfinne Star Median saaxiluun ni yaadatama. Abbabaa Garasuu fi Baqqalaan goota kana mana hidhaarra baasanii kan ajjeesan ega Abbo
Post Likes Profile Hanan Mohamed
Hanan Mohamed 10months ago